Berlọ nke ndị injinia na-ahụ maka ijikwa ụgbọ ala IETT | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulChamlọ nke ndị injinia na-ahụ maka ijikwa ụgbọ ala IETT
Chamlọ nke ndị injinia na-ahụ maka ijikwa ụgbọ ala IETT
14 / 02 / 2020 34 Istanbul, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metrobus, Turkey
Lọ ndị injin na-ahụ maka ilekọta bọs iett
IETT bịanyere aka na Chamlọ nke ndị injinia mepere anya n'ime mkpesa na ndozi nke bọs ya. N'ụzọ dị otú a, ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ya ga-enyocha azịza ajụjụ ndị a ma ọ bụghị ụlọ ọrụ nyocha nke IETT na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka mmezi. “Ihe ahụ e dochiri n'ụgbọ ala ahụ ezighị ezi? Akụkụ nke dochie anya ọ̀ bụ ihe ọhụrụ na nke mbụ? ” Azịza ga-enyere gị aka ịmata azịza ajụjụ ndị a.
Na-eje ozi nde ndị njem 4 nde kwa ụbọchị, IETT na-arụ ọrụ mmezi na ndozi ya na ụgbọ ala iri na otu ya na bọs 3 puku 65. Dika nkwekorita nke ulo oru ndi injinia, ndi oru ugbo ala, ha na ndi nlekota anya na ndi oru nlebara anya na aru oru na IETT.
Ebumnuche nke nkwekọrịta maka "Nnyocha Nlekọta na Ndozi Ọrụ Garage" na Branlọ Ọrụ Istanbullọ Ọrụ Istanbul nke berlọ ndị injinịa Mechanical bụ inye akwụkwọ nyocha nke onwe bọs nke IETT site na usoro a na-akpọ anya nke atọ. A ga-enyocha ma ọrụ nrụzi ụgbọala na arụzi arụzi ya dị ka ọkọlọtọ teknụzụ dị mkpa si dị, a ga-enyocha ogo nke ọma na njirisi ndị gọọmentị kpebiri.
ỌR QU AJVJ W N'ALAEZE EGO
Ndị nnọchianya ụlọ ga-enyocha arụmọrụ nke ndị ọrụ nkwekọrịta mmezi, kwadebe akụkọ ma mata akụkụ ndị mepere emepe iji melite, ma hụ na ejiri usoro ndị dị mkpa. Ya mere, ebumnuche ya belata mbibi ụgbọ elu nke ọdịda ụgbọ ala na-ebute ma mee ka nchekwa nke ndị njem. Nyocha a na-atụ anya ime ka afọ ojuju ndị njem site na imeziwanye ọrụ.
A ga-ejide ndị na-agụ akwụkwọ n'ime ụzọ abụọ
nyocha; teknụzụ na usoro nleba anya ga-arụ ọrụ n'ime ọkwa abụọ. Na nyocha ndị ọrụ, a ga-enyocha ya ma arụzi yana mmezi ya dabere na njirisi ọrụaka. Na ntinye akwụkwọ nyocha; A ga-enyocha ya ma ewepu ihe ndị na - abụghị ihe arụpụtara na nyocha ọrụ aka.
Ndị Injinia Na-arụ ọrụ na-anwale Silkworm Tramway
Ụlọ ọrụ ndị na-amụ banyere nkà mmụta mbara igwe: Akwụkwọ akụkọ nke akụkọ ikpe ziri ezi maka nchegbu anyị
Ụlọ ọrụ nke ndị na-ahụ maka ihe ọkụkụ Sivas na-anọchite anya ndị ọrụ obodo
Berlọ nke ndị injinia mebere ụgbọ ala Bursa Alaka Mgbasa Ozi: Bursa Metropolitan…
Iga nke ndị na-arụ ọrụ eletrikiiki gara TCDD (Foto Foto)
Ụlọ nke ndị na-arụ ọrụ n'ịrụ ọrụ
Zụọnụ Okwu Mberede site na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịnihu
Channel Istanbul Nkà na ụzụ si na ụlọ ọrụ TMMOB nke ndị na-ahụ maka gburugburu ebe obibi
AKER Machine Production Machine (Video)
Nwa Ahịa nke İzmir kọwara 35 Electric Buses na İzmir
IETT Buses kpuchie na Posters nke IETT Football Team
Turkey Okporo ígwè System Engineers na Technicians jupụta!
Ihe omume usoro okporo ụzọ: okporo ụzọ ndị na-ahụ maka okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè ASNET 2012 - London
Nzukọ A na-ebu Transportgbọ njem na Finike na Kumluca
Kocaeli City Hospital Tram Line Haziri Atụmatụ